Chelsea Oo Dib Ugu Yeedhatay Xiddig La Illoobay Oo Amaah Kaga Maqnaa - GOOL24.NET
Chelsea Oo Dib Ugu Yeedhatay Xiddig La Illoobay Oo Amaah Kaga Maqnaa
Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa dib ugu yeedhatay xiddig la illoobay inuu xataa ka tirsan yahay naadigaas oo muddo amaah kaga maqnaa, waxaana sababay dhaawaca soo gaadhay difaaca bidix ee reer England ee Ben Chilwell oo maqnaanaya inta ka hadhay xilli ciyaareedka.
Emerson Palmieri oo Lyon kaga maqan ayaa la hadal-hayey inuu noqonayo ciyaartoyga ay Blues dib usoo ceshanayso, hase yeeshee suurtogal uma noqon maadaama kooxda reer France ay ku adkaysatay fulinta heshiiskii ay kula soo saxeexatay laacibkan.
Chelsea ayaa ka dalbatay Lyon in ay u ogolaato inay difaaca Talyaaniga dib u ceshadaan dhawr bilood kaddib markii uu u wareegay kooxda horyaalka Faransiiska, waxaase arrintaasi ay u cuntami weyday Lyon oo si cad u diiday.
Thomas Tuchel oo sidoo kale uu dhaawac kaga maqan yahay Reece James oo muddo laba bilood ah jiifaya, ayaa waxa uu xaqiijiyey in kooxdiisu ay waddanka Brazil uga yeedhatay ciyaartoy amaah kaga maqnaa oo aan sannado kasoo muuqanin Stamford Bridge.
Tababaraha reer Germany oo ka hadlayay shir jaraa’id ayaa waxa uu sheegay in kooxdiisu ay u yeedhatay difaaca bidix ee reer Brazil ee Kenedy oo amaah ugu maqnaa Flamengo, waxaanu yidhi: “Kenedy ayaa soo laabtay, waanan ku faraxsanahay.
“Fursad weyn ayay u tahay isaga inuu isku muujiyo kooxda, naadigana waxay u tahay faa’iido. Lga bilaabo maanta waxa aanu siku dayi doonaa in aanu riixno oo aanu u caawino sida ugu fiican ee karaankayaga ah.”
Kenedy oo ay d’iisu tahay 25 jir ayaan Chelsea u ciyaarin tan iyo xilli ciyaareedkii 2017/18, waxaana uu waqtiyo amaah ah kusoo qaatay kooxaha Watford, Newcastle United, Getafe, Granada iyo hadda oo uu Flamengo ka tirsanaa.
Xilli ciyaareedkan socda, waxa uu Flamengo u saftay dhamaan 10kii ciyaarood ee ay dheeshay xilli ciyaareedkan socda, waxaase uu shalay qirtay inuu la yaabay in Chelsea ay dib ugu yeedhay.
“Layaab ayaa igu dhacay shalay markii aan abaaro 11kii fiidnimo ogaaday in Chelsea ii yeedhay. Wax walba si degdeg ah ayay ku yimaaddeen. Chelsea ayaa lasoo xidhiidhay Flamengo. Aniga ayay i weydiiyeen aragtidayda, anna waan is bandhigay, sababtoo ah heshiiskayga ayaan fulinayaa.”